၀ န်ကြီးချုပ်၏ခေတ္တ ၀ န်ကြီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလျစ်လျူရှုသောအရာ
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » Eswatini Breaking News » ၀ န်ကြီးချုပ်၏ခေတ္တ ၀ န်ကြီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလျစ်လျူရှုသောအရာ
အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • Eswatini Breaking News • အစိုးရသတင်းများ • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
Themba Nhlanganiso Masuku၊ ၀ န်ကြီးချုပ် Eswastini
အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုအာဖရိကနိုင်ငံအက်စ်တီတီနီတွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအုပ်စုများနှင့်အစိုးရများကိုစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းသို့ခေါ်ဆောင်ရန်အလုပ်များစွာလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကန ဦး တိုးတက်မှုအချို့ရရှိခဲ့သည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသော ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်သည်ဇူလိုင် ၄ ရက်က SADC Troika အစည်းအဝေးအားနိုင်ငံသားများအားပြောကြားခဲ့သည်
နိုင်ငံသားများ၏ဆန္ဒစာရင်းကို ၀ န်ကြီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်နိုင်ငံသားအုပ်စုများနှင့်အီစတီနီနီအစိုးရအကြားအရေးပေါ်လိုအပ်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုကန ဦး အစဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
COVID-19: Eswatini ကိုနောက်ထပ်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုရှိကြောင်း ၀ န်ကြီးချုပ်ကသတိပေးသည်
တောင်အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးအသိုင်းအ ၀ န်းသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တည်ငြိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကိုခွင့်ပြုရန်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံသားများကိုအတူတကွစုရုံးရန်အက်စ်တီနီမှနိုင်ငံတော်သို့သွားခဲ့သည်။
စစ်တပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေပြီးပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည်အင်္ဂါနေ့ မှစတင်၍ အလုပ်ပြန်လုပ်ကြလိမ့်မည်။ ပြည်သူလူထုအားမိန့်ခွန်းပြောကြားသည့် ၀ န်ကြီးချုပ်သည်လူတိုင်းကိုအလုပ်ပြန်ဆင်းရန်နှင့် COVID-19 ခြိမ်းခြောက်မှုကိုသတိထားမိရန်တိုက်တွန်းသည်။
အဆိုပါ Eswatini အစိုးရသည် SADC သို့ပြောကြားခဲ့သည်တောင်အာဖရိကမှမှောင်ခိုတင်ထားသော ဦး ထုပ်များသည်နိုင်ငံသားများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သေနတ်များကိုတောင်အာဖရိကရှိ EFF မှရရှိခဲ့ပြီး၎င်းအား၎င်း၏ညီမအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောဆွာဇီလန်နိုင်ငံ၏ EFF သို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တိုက်ပွဲဝင်သူများ (EEF) တောင်အာဖရိကရှိလက်ဝဲယိမ်းပါတီသည်လက်ဝဲဘက် pan-Africanist နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပယ်ခံရသောအာဖရိကအမျိုးသားကွန်ဂရက်လူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကPresident္ဌဂျူးလီယပ်မာလမာနှင့်သူ၏မဟာမိတ်များကတည်ထောင်ခဲ့သည်။
နှစ်ခုလွတ်လပ်သောအဆိုအရ eTurboNews သတင်းရင်းမြစ်, Eswatini စစ်သားများ၏ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်သောင်းကျန်းသူ Eswatini သက်ဆိုင်သူများနှင့်ရင်ဆိုင်ရပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒဏ်ရာနှင့်သေခြင်း၌ရလဒ်များမြင်ခဲ့ကြသည်။
ဘီဘီစီမှ Audrey Brown နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် အာဖရိကကိုအာရုံစိုက်ပါဘုရင်၏သတင်းနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Sikhanyiso Dlamini က Covid-19 ၏တတိယမြောက်လှိုင်းကြောင့်မကြာခဏအသနားခံလွှာတင်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းအတွက် virtual reality တင်ဆက်မှုကိုပြောကြားခဲ့သည်။ “ နိုင်ငံခြားသားကြေးစားကြေးစားတွေကဒီပြည်သူတွေ (ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသူတွေ) ကဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့သူတို့ငှားရမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျူးကျော်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်။ ရဲယူနီဖောင်းနှင့်စစ်ယူနီဖောင်းများတွင်၊ နိုင်ငံသားများအားထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားများအားတိုက်ခိုက်နေသည့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဗွီဒီယိုများပေးပို့ခြင်း။ ဤသို့သောအမိန့်မျိုးရှိပါကသတ်ရန်သေနတ်ပစ်အမိန့်ကိုဘုရင်မှထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ”
တနင်္ဂနွေနေ့4ဇူလိုင် 2021, နှစ်ခု Frame ဂျာနယ်လစ်အသစ်များ eSwatini တွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသောခမ်းနားသော Mndebele နှင့် Cebelihle Mbuyisa တို့ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီး၊ တိုက်ခိုက်၊
New Frame ဂျာနယ်လစ်များသည် eSwatini တွင်ရှိနေပြီးနိုင်ငံသားများ၏လူသတ်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်။ ဒီမိုကရေစီလိုလားသောဆန္ဒပြမှုများကိုသတင်းပို့သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိနေစဉ်တွင်၎င်းတို့အားဖုန်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏ဖုန်းများနှင့်ကင်မရာများမှဖယ်ရှားခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
A အရေးကြီးဆုံးသက်ဆိုင်သူ ၂၀ မှဆန္ဒစာရင်း။ Eswatini ရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရသို့ SADC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှတဆင့်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ ၀ င် ၀ န်ကြီးချုပ်၏မိန့်ခွန်းတွင်ဇူလိုင် ၅ ရက်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ပြည်နယ်အကြီးအကဲ၊ အီစတီတီနီဘုရင်မှတိုက်ရိုက်စကားလုံးမရှိသေးပါ။ Mswati III ကို.
Eswatini နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ န်ကြီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်
Asivusele Bekunene ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးစုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် emaSwati အားလုံး၏ဘ ၀ များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်မှာအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းမစ်ရှင်မှာရှိနေတဲ့ SADC Troika အဖွဲ့ကိုလက်ခံရရှိခြင်းဟာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသအတွင်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည့်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝြေခင်းကြောင့် SADC ၏အချက်အလက်များရှာဖွေသည့်ဤတာ ၀ န်သည်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လုပ်နေစဉ်စိတ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့ Nation ကိုအသနားခံပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်မျှပင်ကွဲပြားခြားနားပါစေလူတို့၏ဘဝကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပျက်ပြားစေသောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုတွင်မျှမပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတာ ၀ န်ရှိသည်။
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုယက်သူများကကျူးလွန်သောလက်မခံနိုင်သောပျက်စီးမှုများသည်ဘီလီယံနှင့်ချီသော Emalangeni သို့ရောက်ရှိနေပြီးတိုင်းပြည်၏လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ဆုတ်ယုတ်စေသည်။ လက်ရှိခန့်မှန်းချက်အရပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကုန်ကျစရိတ်သည် E3 ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးအလုပ်အကိုင် ၅၀၀၀ ခန့်ပျောက်ဆုံးနေပြီးရေတွက်နေသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (MSMEs) ကိုလည်းဤလုယက်သူများကမချမ်းသာပါ၊ အကြောင်းမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ် ၁၀၀၀ ခန့်ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
မကြုံစဖူးသောအကြမ်းဖက်မှုများသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကဏ္ hard အပေါ်များစွာထိခိုက်ခဲ့သည်။ အခြားသူများမှလူနာတင်ယာဉ်အပါအ ၀ င်ကျန်းမာရေးယာဉ်ခြောက်စီးအားဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ အချို့သောအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့တွင်အဆက်အသွယ်ခြေရာကောက်ရန်အစီအစဉ်နှင့်အထူးသဖြင့် COVID-19 ယာဉ်များပါဝင်ပြီး Shiselweni ဒေသရှိ COVID-19 နမူနာများကိုသယ်ဆောင်သည်။ Nhlangano ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရုံးများပိတ်မိသွားသည်။ Lubombo ဒေသရှိလူနာတင်ယာဉ်နောက်လူနာတစ် ဦး သည်လူနာများ၏ဘ ၀ ကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤလုယက်သူများနှင့်အဓိကရုဏ်းများကြောင့်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော Tinkhundla စင်တာ ၁၀ ခုထက်ကျော်လွန်နေသည်။
ဤကံဆိုးသောအခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ COVID-19 တုန့်ပြန်မှုကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သော်လည်း emaSwati အားလုံးကိုကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းရာတွင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Nation ကိုထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည်နိုင်ငံ၏ဒေသ ၄ ခုတွင်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုပြတ်ပြတ်သားသားသေချာစေခဲ့သောကြောင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းမြေပြင်အနေအထားတည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းအစိုးရမှဝမ်းမြောက်စွာမှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်အများပြည်သူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်သို့ပြန်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ရန် emaSwati အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ သို့သော်၎င်းကို COVID-19 စည်းမျဉ်းများနှင့်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာသင့်သည်။ ညမထွက်ရအမိန့်ကိုည ၆ နာရီမှနံနက် ၅ နာရီအထိဆက်လက်တည်ရှိပြီးညမထွက်ရအမိန့်ကိုအချိန်မီအိမ်သို့လုံခြုံစွာရောက်ရှိနိုင်စေရန်ရုံးများကိုညနေ ၃း၃၀ တွင်ဆက်လက်ပိတ်ထားသင့်သည်။
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် eVaswati မှလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဆက်လက်၍ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော COVID-19 ၏ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်း၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များတိုးပွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တွေ့ကြုံခံစားနေရသည် 96 ၁၃-၁၉ ဇွန်လကြား၊ 207 20-26 ဇွန်၏တစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားမှုနှင့် 242 27 ဇူလိုင် 3. 2021 ရက်သတ္တပတ်5ဇွန်လအတွင်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ၏ယေဘုယျလမ်းကြောင်းသည်မနေ့ကအဖြစ် ၃% မှ ၉% သို့တိုးမြှင့်ပြီးစမ်းသပ်မှု၏အကောင်းမြင်မှုနှင့်အတူဆက်လက်မြင့်တက်နေသောလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြသသည်။ COVID-3 နှင့်ဆက်စပ်သောသေဆုံးမှုသုံးခုသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအစီရင်ခံပြီးနောက်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထီးကျန်အဆောက်အ ဦ များ၌အိပ်ယာထနှုန်းမှာ ၉ ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းကိန်းဂဏန်းများမြင့်တက်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်သည်တတိယလှိုင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်များဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသနေသည်။ စီမံကိန်းများအရအမြင့်ဆုံးသို့မရောက်ရှိမီလာမည့် ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်အကြားရောဂါအသစ်များကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားမည်ဟုဖော်ပြသည်။ ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များတိုးများလာခြင်းကနှစ်ပတ်အတွင်းသေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ထပ်မံ၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိနေရန်နှင့် COVID-19 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာရန် emaSwati များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အယူခံဝင်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းအစိုးရသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလေ့ကျင့်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် emaSwati အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကိုဆက်လက်ထုတ်ယူနေသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင် Oxford-AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး၏နောက်ထပ်ဆေးပမာဏ ၁၂၀၀၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည်။ ဒီဆေးများ 12
ကာကွယ်ဆေးလေ့ကျင့်ခန်း၏နောက်အဆင့်သို့သွားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကိုဒုတိယဆေးထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးအသစ်များကိုပေးလိမ့်မည်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှလူတစ် ဦး သို့ကူးပြောင်းမှုကြောင့်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်နိုင်ငံအတွင်းပျံ့နှံ့နေကြောင်းတိုးပွားလာသောအခွင့်အလမ်းကိုသတိပေးပါရစေ။ ? ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကူးစက်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှုကိုလူ ဦး ရေနှင့်သက်ရောက်စေရန်အစိုးရအနေဖြင့်အစိုးရမှချမှတ်ထားသော COVID-19 စည်းမျဉ်းများကိုဆက်လက်လိုက်နာရန် Nation ကိုတောင်းဆိုသည်။
၁။ သင်၏မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ပြီးနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ပါ။
၃။ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောသို့မဟုတ်လေလည်ပတ်မှုနည်းသောလူအုပ်နှင့်နေရာချခြင်းကိုရှောင်ပါ။
COVID-19 မှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင် ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများကိုလည်းကာကွယ်ပါရစေ။
ငြိမ်းချမ်းစွာမတ်လဇူလိုင်လ 10PM အပေါ်
နယူးယောက်ရှိကုလသမဂ္ဂ #JusticeforThabani #EswatiniProtests #TiniTwitter #အက်စ်ဝပ်တီနီ #ဆွာဇီလန် #FreeSwaziland #ဒီမိုကရေစီနည်းကျ #Kungahlwakwenile #တော်ဝင်နန်းတော်ချုပ်နှောင်ခြင်း #ဒီမိုကရေစီဆဝါဇီလန် #ဆုတောင်းခြင်း #SwaziLivesMatter pic.twitter.com/XTxWe5v51z
- #SwaziLivesMatter (@ swazilivesmatt1) ဇူလိုင်လ 5, 2021
မကြာသေးမီကလုယက်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအကြီးအကျယ်ဆုတ်ယုတ်စေခဲ့သော်လည်း emaSwati သည်ဤရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ဤစစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါ။ လူတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ငါတို့အစွမ်းကုန်လုပ်မယ်။
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
အခြားမှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Manzini၊ Hluthi, Hlatsi နှင့် Siphofaneni မှလွဲ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပြည်ထဲရေး ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာများသည်မနက်ဖြန်မှစတင်လည်ပတ်လိမ့်မည်ဟု Nation ကိုအာမခံသည်။
အစိုးရသည်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောဆူပူအုံကြွမှုများအတွင်း၌ပျက်စီးခဲ့သည်ကိုအစိုးရကလည်းသိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Nation သို့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ၂၀၂၀ ဇူလိုင် ၂၀ အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်Augustဂုတ် ၃၁ အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် emaSwati၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၊ သံတမန်ရေးရာမိတ်ဖက်များနှင့် Eswatini မှနေထိုင်သူများအားလုံးကိုဘ ၀ လုံခြုံမှုပြန်လည်ရရှိစေရန်အများပြည်သူလုံခြုံမှုရှိစေရန်လိုအပ်သည့်အရာမှန်သမျှကိုအာမခံပေးလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောအမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဟဇာတဖြစ်မှုကိုခြိမ်းခြောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်နိုင်ငံခြားမှမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုအကာအကွယ်ပေးရန် emaSwati အားလုံးအပေါ်တွင်ဆက်လက်အားထားနေရသည်။
ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ငါတို့ရာစုနှစ်တွေကျော်ကြာကျော်ကြားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ငါတို့အားလုံးအပေါ်မူတည်တယ်။ အဲဒါကငါတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲ။
ခေတ္တ ၀ န်ကြီးချုပ်
COVID-19 အောက်ရှိ City of Angels သည်တတိယမြောက်မြင့်တက်လာသည်။